စိုးစံ(လင်း)သို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ . . . - Soe San Lynn Co.,LTD.
စိုးစံ(လင်း)သို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ . . .
by Soe San Lynn Main Branch/0 comments/Soe San Lynn Realestate, Uncategorized
🙏 တစ်ခါဆက်ဆံ ရာသက်ပန် 🙏
လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများ ရောင်း/ဝယ်၊ ငှားလိုသည်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုးစံ(လင်း)အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်အပ်နှံနိုင်ပါတယ်. . .
Choose ဆိုသော စကားလုံးလေးအတိုင်း ဧည့်သည်လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် မိမိတို့ နေထိုင်လိုသည့် မြို့နယ်၊ မြေအမျိုးအစား၊ အိမ် ပုံစံ၊ အသုံးပြုမည့် ငွေ ပမာဏ စသည်တို့နှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူ/ရောင်းချနိုင်အောင် စိုးစံ(လင်း)မှ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင် . . .
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကျိုးကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အရိုးရှင်းဆုံး အဖြေတစ်ခုကတော့ မိမိ၏လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော ငွေကြေးပမာဏတွေကို ပိုမို တိုးပွားချင်လို့ပါပဲ။ ငွေတွေကို အိမ်မှာပဲ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ငွေကြေးတွေဟာ မတိုးပွားလာတဲ့အပြင် ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင်လည်း မိမိအတွက် တကယ်အကျိုးအမြတ်ရှိစေမည့် နေရာတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတယ် . . .
ဒါ့ကြောင့် စိုးစံ(လင်း)အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အကျိုးဆောင်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင် . . .
မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် နေထိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများကို ရောင်း/ဝယ်/ငှား ပြုလုပ်လိုလျှင်ဖြင့် page chat box တွင်ဖြစ်စေ၊ comment တွင်ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ရေးသား မေးမြန်းနိုင်သလို အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
01- 75 10 600, 01 – 75 10 950, 09 – 518 55 34, 09 – 51 73 690, 09 – 50 40 160, 09 – 450 450 904, 09 – 50 12 951, 09 – 518 55 39
လူကိုယ်တိုင် လာရောက်မေးမြန်းလိုပါက အမှတ် (၇၀)၊ ပထမထပ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်သို့ (ရုံးချိန်အတွင်း နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ – ပိတ်ရက်မရှိ) လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Find Your Perfect Home For Your Family